Waarddiyihii taajirka noqday - BBC News Somali
Waarddiyihii taajirka noqday
9 Luulyo 2019
Lahaanshaha sawirka ANDY SCOTT
Image caption Andy Scott waxaa uu suurogashay inuu meel sare ka gaaro ganacsiga
Barnaamijka toddobaadlaha ee ka baxa BBC ee lagu magacaabo The Boss ayaa waxaa lagu marti qaadaa ganacsatada waaweyn ee dunida, toddobaadkan waxaa marti ku ah ganacsadaha caanka ah ee Ingriiska u dhashay ee Andy Scott.
Andy Scott waxaa uu galay shil baabuur, waxaa uu dhaawac kasoo gaaray lugaha.
"Shilku wuxuu ka dhashay khaladaad aniga iga yimid, waxaan ka gudbayay waddo ku taalla magaalada Washington DC xilli subax ah, waxaan eegayay telefoonkeyga" ayuu yiri ganacsadahan.
"Ma dareensaneen shilka balse baabuurka ayaa I jiiray, meel fog ayuu igu tuuray"
Ganacsadahan caanka ah ee da'da yare e reer Britain, Andy waxaa uu booqanayay Mareykanka sannadkii 2008-dii, waxaa uu dooni ku maray badda Atlantic.
Milyan dheerkan, Andy waxaa uu leeyahay Huteello, goobo iyo lagu caweeyo iyo hanti kale, waxaa uu ku noolyahay nolol raaxo ah.
Waxaa uu ku safraa diyaaraddiisa gaarka ah iyo labo baabuur oo ah nooca loo yaqaanno Ferrari.
Hase yeeshee, waxaa saameyn ku yeeshay dhaqaalihiisa qalalaasihii dhaqaale ee dunida ka dhacay sannadkii 2008-dii.
Waxaa uu sheegay in markii uu jiray da'da 20 sanno uu lacag amaah ah ka qaatay bangiyada balse uu ku lumiyay 6Milyan oo lacagta Giniga ah.
Andy wuxuu sheegay in markii hore uu niyad jab kala kulmay khasaaraha balse wuxuu wacad ku maray inuu kasoo kabsan doono dhaqaale xumida ku habstay waaggaas.
Image caption Andy waxaa uu leeyahay shirkado badan oo ganacsi
Andy wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray magaalada Portsmouth ee ku taalla xeebta koonfureed ee Ingiriiska, waxaa uu lacago ka heli jiray soddogiisa oo uu gaari u wadi jiray kaas oo lahaa dhowr Dukaan.
Waxaa uu dheeli jirtay ciyaarta Rugby, waxaa uu sidoo kale ahaa Feryahan, waxaa uu warddiye ka ahaan jiray baar lagu caweeyo oo ku yaalla Portsmouth sannadkii 1995-tii markaas oo uu jiray da'da 16 jir.
"Waxay u muuqatay in aan yaraa, balse sharciga wuu ii ogolaa waaggaas in aan ku shaqeeyo da'daas, waxaan ahaa Korey" ayuu yiri Andy.
Markii uu gaaray da'da 18 jir waxaa uu Ayeeydiis ka dhexlay 5000 lacagta gini ah, waxaa uu ku iibsaday guri.
Waxaa uu dhawaan iibsaday guryo badan, Huteello iyo goobo lagu caweeyo.
Wixii ka dambeeyay sannadkii 2008-dii, saddex bilood ayay ku qaadatay inuu kasoo kaco shilka, waxaa uu u baahnaa dhaqaale uu ku maalgeliyo ganacsigiisa, waxaa uu sameeyay gancsiga guryaha, balse ma jirin cid dooneyso inay ka amaahiso lacag qof dhaqaale noqday.
Ugu dambeyntii, qof ay saaxibo ahaayeen ganacsadahan ayaa ka deymiyay lacago sii dhismo kaniisadeed iyo goob filimada lagu daawado uu ugu baddeli lahaa baar lagu caweeyo, fikraddan ayaa noqotay mid mirodhal oo uu ganacsi ka sameeyay.
Image caption Andy, shaqadiisii ugu horreeyay waxay aheyd markii uu waarddiye ka noqday goob baar ah
Wixii ka dambeeyay xilliggaas, Andy waxaa uu sheegay in uu sare u qaaday ganacsigiisa isla markaasa uu wax badan ka bartay si uu uga faa'ideyso fursdaha.
Maanta, shirkaddiisa REL Capital waxay ka kooban tahay dhowr ganacsi sida Huteello, baar, shirkado dadka shaqaaleysiiya iyo ganacsi ku saabsan adeegyada xafladaha.
"Waa ganacsi kala duwan, waxaan khibrad u leeyahay dhammaan qeybaha kala duwan ee ganacsiga, waxaan ku takhasusnay ganasciga, waxaan sameynay shirkado"
Andy waxaa uu isugu yeera inuu yahay 'Ganacsade', waxaa uu iibsaday shirkado hor leh oo ganacsi waxaa uu u magaacabay agaasimeyaal si ay u maamulaan shirkadahaas.
"Waxaan xilli hore bartay faa'iidoyinka aan sameeyay iyo dib u dhaca ku yimid ganacsigeyga" ayuu yiri Andy.
Isaga oo dib u eegaya sida uu ku guuleystay ganacsigiisa ayaa waxaa uu sheegay in aysan jirin Bangi dambe uu dib celin dadaalkiisa ganacsi.
Image caption Andy, markii uu shilka ku galay Mareykanka
Waxaa uu sheegay in deyn bixiyaasha Mareykanka ay deymaha u cafiyaan ganacsatada la kulmo khasaaraha.
Eleanor Shaw, oo ah profesar ganacsiga ka dhiga Jaamacadda Strathclyde, ayaa ku raacsan in UK ay u baahantahay in ay raacdo tusaalaha Maraykanka.
Profesoor Eleanor Shaw oo ku takhasusay arrimaha ganacsiga ayaa waxaa uu qabaa in Ingiriisku uu ku daydo tallaabada Mareykanka.
"Mareykanku, ganacsatada wax khasaaro kalama kulmaaan guuldarrooyinka ku habsaday balse waxay diiradda saarayaan waxyaabaha ay ka barteen, marka tallaabo ka duwan ayay qaadaan si ay u ilaashadaan dhaqaalahooda"